धादिङ ब्रुसबाङका चपाङले थाकथलो छोडे - Naya Pusta
धादिङ ब्रुसबाङका चपाङले थाकथलो छोडे
Naya Pusta २०७४ आश्विन १ September 17, 2017 गते प्रकाशित
छापाबाट, प्रदेश नम्बर ३, समाज
धादिङ, १ असोज । उत्पादन भएको खाद्यान्न तीन महिना मात्र पुग्छ। बाँकी महिना गिट्ठा, भ्याकुर र साग, सिस्नु खानुपर्ने बु्रसबाङका चेपाङहरूको बाध्यता हो। खेती गर्ने जमिन छ तर पर्याप्त पानी छैन । खानेपानी लिन २\_३ घण्टा तल झर्नुपर्ने हुन्छ, गाउँमा उपयुक्त स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय छैन। शौचालय छैन, बाटोघाटो छैन। यस्तै समस्याले पिरोलेका बु्रसबाङका चेपाङ समुदाय बस्ती सर्न तयार भएका छन् ।
‘घर, करेसाबारी, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, शौचालयजस्ता सुविधा मिले बस्ती सर्न तयार छौं,’ बु्रसबाङका ईश्वरी माया चेपाङले भनिन्। खानेपानीसमेत पेटभरि खान नपाएको बताउँदै ईश्वरीले बालबच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि पनि आफू सर्न तयार भएको बताइन्। यहाँ भर्खर जन्मेका बालबच्चाको पनि उचित स्याहारसुसार हुँदैन। पौष्टिक आहार त परैको कुरा। दक्षिणी धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ को महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेको गाउँ ‘ब्रुसबाङ’ का चेपाङ समुदायले बस्ती सारिदिन माग गर्दै सर्न तयार भएको बताएका छन्। खानेपानीको चरम संकट भोग्नु परेका चेपाङ समुदायका लागि पानी रगत जस्तै महँगो हुने गरेको छ।
खानेपानीको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेपछि उनीहरूले आफ्नो बस्ती नै सारिदिन जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग माग गरेका थिए । सरोकारबालासँगको छलफलमा बस्ती सर्न आफूहरू तयार भएको उनीहरूले बताएका छन् । आफ्नो पाखोबारीको उब्जनीले तीन महिना पनि खान नपुग्ने चेपाङहरूमा खानेपानीको समस्याले बालबालिकाको शिक्षादीक्षा, खेतीपाती र पशुपालनमा समेत ठूलो समस्या पैदा गरेको छ। पूर्णबहादुर चेपाङ भन्छन्, ‘गाउँमा अहिलेसम्म मोटर बाटो पुग्न सकेको छैन भने विद्यालयको नाममा बाल विकासको एउटा कक्षा मात्रै छ । भावी पुस्ताका लागि पनि हामी बस्ती सर्न तयार भएका हौं ।’ सो वडामा खुला दिशामुक्त क्षेत्र अभियानका क्रममा विभिन्न संघसस्थाले शौचालयसमेत बनाइदिएको छ। तर पानीको अभावमा शौचालय प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
ब्रुसवाङसम्म पुग्न पृथ्वी राजमार्गको मलेखु बजारदेखि एक दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। ब्रुसबाङको खानेपानी समस्या समाधान गर्न धादिङका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाङले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिदिएका थिए। तर सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा गाउँमा कतैबाट पनि खानेपानी लैजान सम्भव नदेखिएपछि सो रकमले गाउँकै अन्य ठाउँको योजना निर्माणमा खर्च गरिएको थियो। ब्रुसबाङमा कुनै पनि प्रविधिले खानेपानी र सडक बनाउन नसक्ने अवस्था नरहेकाले त्यहाँको बस्ती नै सार्ने योजनामा रहेको बताएका छन्। नयाँ बस्ती बसाउन उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको पनि बताएका छन्।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सुन्दा पत्याउन कठिन हुन्छ, बोको र भाले चढाउने सर्तमा सडक र ढल निर्माण
साढे ८ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष ठहर
शिक्षण अस्पतालबाहिर विमान दुर्घटनामा परेका मृतकका आफन्तको रुवाबासी
मलेसियामा एक नेपालीको घाँटी रेटेर हत्या
विश्व च्याम्पियन फ्रान्स, क्रोसिया ४-२ ले पराजीत
प्रेम पछि रियल इन्गेजमेन्ट गरे आयुष्मान र प्रियंकाले, अब बिहेको साईत कहिले ? हेर्नुस् (भिडियो सहित)
नेपाल हिन्दुराष्ट्र नभए संविधान खारेज हुन्छ : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र !
स्वीमिङ पुलमा डुबेर अमेरिकामा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु
गोरखामा आमाको भूतले तर्साउँदा घरमा कोही बस्दैनन् : (भिडियो)
कति छ आज सुन चाँदीको मूल्य ? हेर्नुहोस् …
उपत्यकामा दिउँसै पेस्तोल किनबेच
सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो , २९ वटा ढोका खोलियो
ओरालो लागेको विदेशी मुद्राको मूल्य आज पनि कमजोर
नगरपालिकाको भवन बनाउने विषयमा विवाद हुँदा २ जना प्रहरीसहित ७ जना घाइते